Pèlerinage à Jérusalem 2019 - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Home »Pèlerinage à Jérusalem 2019
Pèlerinage à Jérusalem 2019
Araka ny voalaza tany amin’ny kongresy Ambatondrazaka dia manomana Pélérinage ho any Jerosalema isika ka toy izao ny mombamomba izany mba hahafahantsika miomana :
Fotoana : 19-29 May 2019
Fiaingana : 18 May 2019
Fiverenana : 29 May
Sarany: 2.300 Euros na 9.660.000 Ar (cours 1 euro= 4200 Ar): tafiditra amin’izany ny frais d’avion (aller-retour)- ny trano (chambre double), sakafo maraina sy hariva (buffet)- ny bus andehanana mandritra ny fotoana rehetra – ny téléphérique amin’ny site sasantsasany – ny sambo hitsangatsanganana amin’ny farihin’i Tibériady – ny fidirana amin’ny toerana manan-tantara voalaza ny programme (Nazareta – Tibériade – Galilee – Jerusalem – Bethlehem – Césarée – Tel Aviv) – Ny olona hitarika (guide francophone) – ny “certificate de pelerine” – Ny visa sy ny pourboire ny chauffeur (obligatoire).
Marihina fa ny frais dia arakaraka ny sandambolantsika ampitahaina amin’ny euros.
Ny olona manana visa shenghen tsy mila visa fa frais d’inscription ihany.
Tsy Tafiditra anatin’io sarany io kosa : ny assurance voyage mandritra ny fotoana hivanihanana, ny fandaniana manokana (dépenses personnelles) ary ny fandaniana raha toa ka marary, ny sakafo antoandro.
Ny zavatra ilaina amin’ny fisoratana anarana:
Fiche d’inscription feno tsara (bien remplie)
Passeport manankery enim-bola aorian’ny daty fiverenana.
Visa na nationalité shengen
Lettre d’engagement de retour
Autorisation parentale légalisée ho an’ny ankizy tsy mbola tonga taona
Ordonnance ho an’ireo mihinana fanafody isan’andro
Ny fisoratana anarana dia mifarana amin’ny faha-15 ny volana Febroary miaraka amin’ny fandoavana ny frais d’inscription sy visa :229 euros sy ny fiche d’inscription feno tsara.
Ny fandoavana sarany ambiny dia ny 07 Martsa fara fahatarany.
Tsy ho raisina intsony ny fisoratana anarana ivelan’ireo satria mila iray volana ny fanaovana visa. Raha toa sanatria tsy mahazo visa dia averina ny vola anesorana ny frais de visa sy ny frais d’inscription 229 euros.
Raha toa aorian’ny fividianana billet no misy tsy fahafahana tampoka dia tsy misy famerenana vola intsony.
Mafana ny andro dia fitafiana mifanaraka amin’izany : kanefa misy toerana tsy maintsy hajaina ka ny lehilahy manao pataloha lava ary voasarona ny soroka. Ny vehivavy manao akanjo ambany lohalika sy voasarona ny soroka (tsy mahazo manao décolleté bory tanana)
Kiraro manaraka ny dia an-tongotra (chaussures de marche-tennis- ballerina) sy satroka na casquette.
Mitondra maillot de bain sy crème solaire (rehefa mande amin’ny Mer morte), lunettes de soleil ary kapa
Fitaovana ilaina: Baiboly- cahier sy stylo –tavoahangy plastique mihidy tsara asiana ranon’i Jordany sy ny argile de la mer morte.
Sakafo antoandro: samy miantoka ny azy (20 euros mahazo sakafo tsotra, misy koa sandwich, afaka mifady), ny rano no ilaina betsaka fa mafana ny andro (mahazo maka rano atao anaty tavoahangy ny maraina sy ny hariva amin’ny fisakafoanana) ny rano iray tavoahangy dia 5shekel na 1;25 euros.
Formation: tokony ho tonga roa andro mialoha eto Antananarivo ny olona handeha rehetra fa misy fepetra tsy maintsy ho fantatra mialoha ny handehanana ary mba hiomana ny tsirairay (vavaka, fandaminana ny fiainana miaraka amin’ny gropy, ny toromarika momba ny fiainana any Israel)
Tsara ho fantatra: vola mandeha any Israel dia shekel. 1euros = 4shekel. 1 Shekel = 1000 Ariary., miasa iany koa ny dollar amerikanina. Ny teny ampiasaina dia hebrio sy arabo, anglais fa vitsy no miteny frantsay. Décalage horaire (GMT + 2h) izany hoe latsaka adiny iray ny ora Malagasy ny ora any Israel.
Miantso an’i Frère Angelo 034 73 431 00 na ny mpandrindra nasionaly 034 06 885 80 raha mila fanazavana fanampiny na mandefa mail: mariehasimbola@gmail.com ary atao copie kristyvelona@gmail.com
Ny mpandrindra nasionaly.